प्रचण्डका ‘डरहरू’- ‘लिन प्याओ’ले मारिदेलान् या त आत्महत्या गर्नुपर्ने हो कि! « AayoMail
प्रचण्डका ‘डरहरू’- ‘लिन प्याओ’ले मारिदेलान् या त आत्महत्या गर्नुपर्ने हो कि!
2021,30 September, 7:04 pm
काठमाडौंमा बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको विद्यार्थी संगठनको २२औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थिए।
हलभरि जम्मा भएका विद्यार्थी अनि ड्यासमा बसिरहेका नेताहरूसामु बोल्दै गर्दा कहिले भावुक भए। कहिले उत्तेजित भए। कहिले हलभरि सन्नाटा छाउँथ्यो, क्षणमै तालिको गडगडाहट।
बोल्दै गर्दा उनले चन्द्र शेखर आजादको कहानी सुनाए। स्वतन्त्र भारतका लागि लड्दै गरेका चन्द्र शेखरले लडाइँको मैदानमा कसरी आत्महत्या गरे भन्ने कुरा उनले सुनाए-
चन्द्र शेखरको फिल्म धेरैले हेर्नुभएको होला। त्यहाँ चन्द्र शेखर आजादको कुरा छ। लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किन ठाउँ रहेन उनको। एउटा रूखमुनि बसेका हुन्छन्। पेस्तोल हुन्छ उनीसँग। अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भनेर। माटो समाउँछन्। एकमुठ्ठी माटो हातमा लिन्छन् अनि भन्छन् – ‘मा यत्ति नै मैले गर्नसकेँ’ भनेर सुसाइड गर्छन्।
‘झन्डैझन्डै मेरो अगाडी फेरि लडाइँ गर्ने कि, आत्मसमर्पण गर्ने? भन्ने स्थिति थियो। आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ। किनकी हज्जारौं हज्जार सहिदको ऋण त मेरै टाउकोमाथि छ’ त्यो प्रसङ्ग सुनाउँदै गर्दा प्रचण्ड एकछिन त भावुक भए। बोल्दा बोल्दै रोकिए। फेरि सम्हालिएर भने– यात मैले सकिनँ भनेर आफूले आफूलाई सुसाइड गर्नुपर्ने। या त लड्नैपर्ने, लड्ने कि मर्ने। फेरि पनि मुक्ति या मृत्युको ठाउँमा पुगेँ। पार्टी भित्र र बाहिर पनि। अन्तिममा पार्टीका सबै साथीहरूबाट फेरि लड्ने पूरै क्रान्तिकारी ढंगबाट लड्ने। मर्नुपर्छ भने पनि मर्ने। जेल जानुपर्छ भन्ने पनि जाने। भन्ने भयो। अनि सुरू भयो सडक आन्दोलन।’
आत्महत्यालाई गलत रूपमा नबुझ्न उनले त्यसको ब्याख्या पनि सुनाए- ‘सुसाइड फेरि सबै नराम्रोमात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको छोरी ज्वाइँहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाइँहरूले पढ्नुभएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन।’
त्यो प्रसङ्ग उनले गत वर्ष ओलीले संसद विघटन गर्दाको क्षणसँग उनले जोडेका थिए।
‘बरू मृत्यु वरण गर्ने। तर क्रान्ति नछोड्ने। प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनकारीसँग नझुक्ने भनेर अघि बढेका हौं’ उनले सुनाए।
पार्टी अलग-थलग हुँदै गर्दा, आफ्ना सहयात्रीहरू छुट्टिँदै गर्दा प्रचण्ड बेला बेला यसैगरी भावुक हुन्छन्। कतिपटक त उनी रोएका पनि छन्। माहोललाई यसैगरी उनले बेला बेला भावुक बनाइदिन्छन्।
बिहीबारको त्यो सम्बोधनमा उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको कुरा पनि निकाले। आफ्नो पनि फेरि माओको जस्तै हालत हुने हो कि भन्ने डर पनि देखाए।
लिन प्याओको डर
अनि पार्टीभित्रैका केही नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वमाथि शंका गरेको पनि बताए।
‘आफ्नैले पनि अब यो प्रचण्डबाट माखो मर्दैन भने। मेरो अगाडि त तपाईं नै हो भन्छन् तर पछाडि अब यिनको काम छैन भनेर भन्ने गरेको सुनेँ। मैले त स्पष्ट विचारसहित कोही यो सबै आन्दोलन सम्हालिदिने आयो भने किताब लेख्न बस्छु भन्ने सोंच्छु। तर यसो यता हेर्‌यो। उता हेर्यो कोही देख्दिनँ’ प्रचण्डले भने– ‘कोही आउनुहुन्छ भने म बाटो छोडिदिन्छु। तर कसैलाई उभ्याउने पक्षमा म छैन।’
उनले ‘जनयुद्ध’को सुरूवातदेखि नै आफूलाई एक्ल्याउने अनि माओवादी युद्ध सिध्याउने षड्यन्त्र भएको पनि सुनाए। उनले भनेको त्यो ‘षड्यन्त्र’ पार्टी भित्रैबाट गरिएको थियो र पार्टी बाहिर पनि।
‘केही प्रतिक्रियावादीहरूले तीन महिनामै यो आन्दोलन सकिन्छ भन्ने हल्ला चलाए। केहीले एक वर्षमै सकिन्छन् भने। टाउकोकै मूल्य समेत तोकेपछि त अब त सिद्धिए नै भने। तर हामी सिद्धिएनौं। पछिल्लो समयमा फेरि यो प्रचण्डबाट माखो मर्दैन भनेर बिरोधीहरूले र आफ्नैले समेत भने।’
अनि प्रचण्डले फेरि ‘लिन प्याओ’को नाम लिए।
‘यहाँ त कसैलाई अघि सार्‌यो। लिन प्याओ बनिहाल्छन्, माओले लिन प्याओलाई उत्तराधिकारीका रुपमा अगाडि सारे, उसैले माओको हत्या गर्ने षडयन्त्र गर्‌यो। म त्यो पक्षमा छैनँ’ उनले भने।
चिनियाँ कम्यूनिष्ट आन्दोलनका ‘लिन प्याओ’ एउटा यस्तो पात्र थिए जो क्रान्ति नायक माओसँग नजिक हुँदै आन्दोलनको सफलतापछि रक्षामन्त्री समेत भए।
पछि उनैले माओको हत्या गर्नका लागि ‘प्रोजेक्ट ५७१’ तयार पारे। र, पार्टी कारबाहीको डरले भागेर १९७१मा रुस जाँदै गर्दा हवाई दुर्घटनामा परेर उनको मृत्यु भयो।
देङ रोङले लेखेको पुस्तक ‘देङ स्याओ पिङ और सांस्कृतिक क्रान्ति’ नामको पुस्तकमा कुनै बेला माओले आफ्नै उत्तराधिकारी घोषणा गरेका प्याओको उदय र अन्त्यसँगै कैयौँ पात्रहरुको बारेमा लेखिएको छ। जसलाई भारतीय लेखक रन्जन बर्माले हिन्दीमा अनुवाद गरेका छन्।
तर, प्रचण्डले सही विचारले संगठन हाँक्नसक्ने कोही आयो भने आफू नेतृत्व सुम्पिन तयारै रहेको पनि सुनाए।
प्रचण्डले संकेत गरेका लिन प्याओ को होलान्?
दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डमाथि यस्ता थुप्रै आरोपहरू छन्। ‘नेतृत्वमा टाँसिरहने’ देखि ‘शक्ति क्षीण हुने डर’सम्मका।
पार्टीको नेतृत्वका बारेमा पनि पटकपटक बहस र विवादहरू भएका छन्। तर अहिले उनीसँगै जनयुद्ध गरेका सहयात्रीहरू मोहन बैद्यदेखि बाबुराम भट्टराई अनि ‘विप्लव’देखि ‘बादल’हरूसमेतले उनलाई छोडिसकेका छन्।
अखिल क्रान्तिकारीको आजको सम्मेलनमा प्रचण्डले लिन प्याओको प्रसंग निकालेपछि कतिपयले माओवादी स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई प्रचण्डले कटाक्ष गरेको आशंका समेत गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा केही अनलाईन र सामाजिक सञ्जालमा अबको राष्ट्रिय सम्मेलन या महाधिवेशनबाट जनार्दन शर्मा पार्टी अध्यक्ष बन्ने हल्ला फिँजाइएको थियो। विद्यार्थी संगठनमा पनि जनार्दन शर्माका भाई अनिल शर्माले यसअघिको सम्मेलनमा उम्मेदवारी दिएपछि औपचारिकरुपमा संगठन दुई गुटमा बाँडिएको थियो।
शर्मा रञ्जित तामाङसँग पराजित भएपछि पनि उनले देशव्यापीरुपमा गुट निर्माण गरेका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा समेत अनिल शर्मा पक्षले पञ्चासिंहलाई अघि सार्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएकोले अध्यक्ष प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेको समेत पार्टी सर्कलमा चर्चा छ।
यसको संकेत अध्यक्ष प्रचण्डको आजको भाषणमा पनि देखिन्थ्यो। उनले क्रान्तिकारीलाई झण्डै दुई गुटमा फुटाइसकेको बताउँदै नेतृत्व चयनमा कुनै गुटलाई प्रश्रय नदिने स्पष्ट पारे। यो एकताको सम्मेलन हुने र यसबाट अरु सबै संगठनहरुले पाठ सिक्ने उनले बताए।